भोलि चैत्र ६ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल ! – Ramailo Sandesh
तपाईको तन र मन स्वस्थ मध्यम रहनेछ। खर्चको चिन्ताले मन अशान्त रहनेछ। बोलीमा ध्यान राख्नुहोला। बाहिरको खानेकुरा नखानुहोला होला। मनमा नकरात्मक एवम उदासीन विचार आउन नदिनुहोला। आर्थिक दृष्टिकोणले दिन मध्यम फलदायी रहेको छ।
शारीरिक वा मानसिक रुपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। कार्यप्रति एकाग्र रहनुहुनेछ। धन लाभ होला। धन सम्बन्धित विषयमा सुयोजित गर्नुहुनेछ। परिवारसँग समय सुखपूर्वक बिताउनुहुनेछ। आत्मविश्वास बढेको महसुस गर्नुहुनेछ।
शारीरिक एवम मानसिक अस्वस्थता कारण निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। विशेषगरी आँखामा पीडा हुनेछ। परिवार र आफन्तसँग कुनै घटना हुनेछ। कुराकानी वा व्यवहारको कारण भ्रममा नपर्नुहोला। आयको अपेक्षा खर्च अधिक हुनेछ। मानसिक चिन्ताको कारण निराश रहनुहुनेछ।
तपाईको दिन आनन्द र उल्लासमा बित्नेछ। व्यापारमा लाभ हुनुको साथसाथै आयको श्रोत बढ्नेछ। साथीसँग भएको भेटले आनन्द महसुस गर्नुहुनेछ। विवात्सुकको लागि विहेको योग रहेको छ। शारीरिक एवम मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ।
दृढ मनोबल र आत्मविश्वासले हरेक कार्य सफलतापुर्वक सम्पन्न हुनेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा प्रतिभा बढ्नेछ। कला एवम खेलकुदमा आफ्नो प्रतिभा दर्शाउनु हुनेछ। सरकारको साथसाथै धनको व्यवहार गर्नुहुनेछ।
दिन निकै शुभ रहनेछ। धार्मिक कार्य एवम यात्राको लागि समय अनुकुल रहेको छ। स्त्री मित्रबाट लाभ हुनेछ। विदेशगमनोत्सुकको लागि अनुकुल दिन रहेको छ। विदेश स्थित आफन्तको समाचार मिल्नाले आनन्द मिल्नेछ। भाई-बहिनीबाट आर्थिक रूपले लाभ हुनेछ।
बोलीको ध्यान राअह्नुहोल। सरकार विरोधी प्रवृत्ति, क्रोध एवम कामवृत्तिभन्दा टाढा रहनुहुनेछ। नयाँ सम्बन्ध अनिष्टकारक हुन सक्नेछ। आर्थिक संकट आउन सक्छ। ईश्वरको आराधना एवम आध्यात्मिकताले तपाईको मन शान्ति प्रदान गर्नेछ।
सामान्य दैनिक कार्यलाई भुलेर आनन्दमा हराउनुहुनेछ। कुनै मनोरंजन स्थल वा पर्यटनस्थलमा जानाले मन अति प्रसन्न रहनुहुनेछ । समाजमा मान-सम्मानको प्राप्ति हुनेछ। मित्र -आफ़न्तसँग घुमफिर गर्नुहुनेछ।
तपाईको लागि दिन हर्षोल्लास रहनेछ। परिवारमा आनन्दको वातावरण छाईरहनेछ। तपाईको मन प्रफुल्लित रहनेछ । तपाईको शारीरिक स्वास्थ्य शुभ रहनेछ। व्यवसायमा दिन लाभदायी रहेको छ।
निर्णायत्मकताको अभाव वा मनको चिन्ताग्रस्त हुनाले कति कुरा बुझ्नुहुनेछैन। स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ताले सताउनेछ। उच्च अधिकारीको रिसको सामना गर्नुपर्नेछ। सन्तानसँग मतभेद हुनेछ। दिन प्रतिस्पर्धिसँग विवादमा नुउत्रिनुहोला।
मन निकै संवेदनशील रहनेछ। विद्याप्राप्तिमा सफलता मिल्नेछ। आयोजित हरेक कार्य राम्रोसँग सम्पन्न हुनेछ। स्त्रीको सौन्दर्य प्रसाधनमा खर्च हुनेछ। सम्पत्ति- घरको पत्रमा दस्तावेज नगर्नुहोला।
अत्यावश्यक निर्णयको लागु दिन उत्तम रहेको छ। सिर्जजनात्मक शक्तिमा वृद्धि हुनेछ। वैचारिक दृढ़ता एवम मानसिक स्थिरताको कारण कारण कार्यसफलतामा सरलता हुनेछ। जीवनसाथीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ ।
खनाल–नेपाल पक्षकी सांसद चौधरी झुक्किएर बालुवाटार पुगेपछि…